HOR DHAC: Poland V Ukraine – Gool FM
(Marseille) 21 Juunyo 2016. Poland waxa ay u baahan tahay dhibic si ay kaalinta labaad u xaqiijiso madaama ay ku dhagan tahay waqooyiga Ireland.
Hase , yeshee, hadii ay badiyan deedna Germany ay ka adkaan weyso waqooyiga Ireland, waxa ay sidaas ugu guuleysan karaan booska kowaad.
Dhinaca kale, Ukraine iyaga tartanka wey ka hartay maadama ay xitaa gool dhalin weyday labadii kulan ee laga soo badiyey.
WARARKA LABADA DAL
-Kaartiiste Mykhaylo Fomenko waxa uu safkiisa Ukraine ku sameyn karaa is badal baaxad weyn isaga oo da’yarta siinaya fursad kooxda kowaad ah kaddib markii ay laba kulan gudohood isaga hareen tartannka.
– Wojciech Szczesny waxa uu dhaawac cajirka ah ku seegay kulankii Germany hadana lama hubo in uu waqti ku filan ku so kaban karo in kale ciyaarta Ukraine ee salaasada, taas waxa ay ka dhigan tahay in Lukasz Fabianski uu wali booskiisa xejisan doono.
-Poland shan ciyaaryahan ayaa hadii ay qaataan kaarka huruudiga ah ka maqnaan doona kulanka kan xiga waxa ayna kala yihiin: Bartosz Kapustka, Kamil Grosicki, Krzysztof Maczynski, Lukasz Piszczek, iyo Slawomir Peszko.
­-Ukraine iyo Poland waxa ay kulmeen toddobo jeer, Ukraine waxa ay badisay saddex halka Poland ay adkaatay laba.
-Ukraine shantii kulan ee ay la dheeshay Poland guul daro lama kulmin (Saddex badisa iyo laba bar bar dhac), waxa ayna badisay labadii ugu dambeeysay. Guushii ugu dambeeysay ee ay Poland dhigeeda ka gaarto waxa ay ahayd bishii September 2000 mar ay isku arkeen is reeb reebka koobka aduunka.
-Kaliya hal mar shantii jeer ee isugu dambeeysay Poland iyo Ukraine ayey midkood awood u heshay in gool wax ka badan iska dhaliyan (Poland 1-3 Ukraine sanadii 2013); afarta kulan ee soo hartay waxa ay isu geyn iska dhaliyeen lix gool.
-Tan iyo markii ay badiyeen kulankoodii ugu horeeyey ee Euro 2012 (Swden ayey 2-1 ku garaaceen), Ukraine wey guul dareysatay afartii kulan ee ugu dambeeysay tartankan iyaga oo aan gool dhalin (Toddobo gool ayaa laga dhaliyey).
-Ukraine goolal la’aanta ay tahay afartii kulan ee ugu dambeeysay Euro-ga waa rikoor lala wadaago taariikhda tartanka.
-Poland waligood wax gool ka badan kama aysan dhalin tartanka koobka qaramada Yurub (Sideed kulan). Gool beegsigoodii ugu dambeeyey ee Euro-ga had socda waxa uu yimi 98 daqiiqo kahor waana kulankii waqooyiga Ireland.
-Poland waxa ay hada gaari karaan wareega 16-ka koobka qaramada Yurub markii ugu horeeysay kaddib markii ay ku fashilmeen 2008, 2012.
Kaar huruudi ah ayey ku seegi karaan kulanka kan xiga: Grosicki, Kapustka, Mączyński, Peszko, Piszczek
Saacadda Geeska Africa: 7Pm
HOR DHAC: Germany V Waqooyiga Ireland